बालविकासमा हात र मस्तिष्कको महत्त्व। - Karkhana
Home Uncategorized बालविकासमा हात र मस्तिष्कको महत्त्व।
बालविकासमा हात र मस्तिष्कको महत्त्व।
बालबालिकाको जीवनको शुरुका वर्षहरू उनीहरुको स्वास्थ्य वा विकासको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बाल विकास भन्नले शारीरिक,मानसिक, भाषा, सोच र भावनात्मक परिवर्तनहरूको क्रमलाई जनाउँछ जुन बालबालिकामा जन्मदेखि वयस्कताको सुरूसम्म देखा पर्दछ।
यो विषयमा अभिभावकहरुले ध्यान दिन निकै जरुरि छ। एक सुरक्षित र मायालु घर र परिवारक साथ संगै उचित पोषण, व्यायाम, र निद्राले पनि ठूलो फरक पार्न सक्छ।
बालबालिकाको विकासमा के समावेश हुन्छ त?
सिक्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमता,
सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमता,
भावनात्मक नियमन गर्न क्षमता,
भाषाको बुझाई र प्रयोग गर्ने, पढ्ने र संचार गर्ने क्षमता,
सम्पूर्ण शारीरिक कौशल /राम्रो मोटर स्किल्ल्स,
संवेदी जागरूकता (Sensory Awareness)
बालविकासमा मस्तिष्कको महत्त्व।
बालबालिकाको विकासमा समावेश हुने क्षमताहरू प्रारम्भिक मस्तिष्कको विकासमा निर्भर हुन्छ। यसले भविष्यको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवन सफलताको लागि आधार निर्माण गर्न सक्दछ, बालबालिकाको स्कूल र जीवनमा सिक्ने र सफल हुने क्षमतामा दिगो प्रभाव पार्छ।
मस्तिष्क मानव शरीरको मुख्य आदेश केन्द्र हो। यो शरीरका सबै कार्यहरूको लागि जिम्मेवार छ। मस्तिष्क कनेक्शनहरूले हामीलाई सबै कुरा जस्तै हिड्डुल गर्न ,सोच्न, संवाद गर्न सक्षम गर्दछ। जन्मदेखि ५ वर्षको उमेर सम्ममा, बच्चाको मस्तिष्क जीवनको कुनै पनि समय भन्दा बढि विकसित हुन्छ। मस्तिष्कको विकास मानव जीवनभरको लागि जारी रहन्छ तर बाल्यकाल यी कनेक्शनहरू बनाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्।यो बेला कम्तिमा पनि एक मिलियन नयाँ तंत्रिका जडानहरू (neural connections) प्रत्येक सेकेन्ड बनिरहेका हुन्छन।
हात/औंलाहरु चालौंनाले मस्तिष्कको विकास कसरी हुन्छ?
मस्तिष्कको विभिन्न भागहरू विभिन्न क्षमताहरूका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। जस्तै ओसीपिटल लोब (Occipetal lobe) : दृश्य क्षेत्र हो जसले आकार,चालको बारेमा दृश्य जानकारी प्राप्त गर्दछ , टेम्पोरल लोब (Temporal lobe): ध्वनी, पिच, ताल, भाषणको व्याख्या, गुरुत्वाकर्षण भाव, सन्तुलन, कम्पन ईन्द्रियको साथ श्रव्य क्षेत्र हो, प्यारीटल लोब(Parietal Lobe) इन्द्रियको लागि क्षेत्र हो जस्तै स्पर्श, दुखाइ, चिसो, अन्तरिक्ष, आकार, बनावट।(Frontal lobe)फ्रन्टल लोब त्यो क्षेत्र हो जुन शरीरभरि मांसपेशिहरू नियन्त्रण गर्दछ, भाषा, निर्णय, समस्या समाधान, बौद्धिक सोच सबै फ्रन्ट लोबमा देखा पर्दछ, यसको कार्य भनेको जानेका,सिकेका कुराहरुको मेमोरीलाई(memory) स्टोर गर्नु पनि हो ।मस्तिष्कको यस क्षेत्रहरुमा एक अर्कासँग जोडिएको न्यूरन्सको संग्रह हुन्छ। एउटा नयूरोन सक्रिय भयो भनि ओरिपरिको अरु नयूरोनहरु पनि सक्रिय हुन्छन। उच्च सोच, रचनात्मकता, भाषा बोली, मोटर प्रकार्य, हात बडी मूभमेन्टहरु (movements) सबै नयूरोनको सक्रियतासंग जोडिएको हुन्छ।
सम्पूर्ण शरीर इन्द्रिय मार्फत जानकारी संकलन गर्दछ। यी संवेदी अनुभवहरूले नयूराल नेटवर्कहरू निर्माण गर्दछ जुन हाम्रो सबै उच्च स्तरको मस्तिष्क विकासलाई नियन्त्रित गर्दछ। अर्को शब्दमा, समृद्ध संवेदी अनुभवहरू (sensory experiences) शिक्षाको लागि आवश्यक आधार हो।
त्यसैले बालबालिकाहरुले मूभमेन्टहरु (movement) गर्दा, हातले केहि कुरा छुदा, चलाउदा, खेल्दा हाम्रो मांसपेशिहरूको सेंसोरी भाग सक्रिय हुन्छ। हातले केहि चलाउदा हाम्रो मांसपेशिहरूमात्र नभई यस्ले हेर्ने, सुन्ने आदि अरु सेंसेसलाई पनि उजागर गर्छ। जसले मस्तिस्कको मुख्य भागमा रगत र अक्सिजनको आपूर्ति बडाउछ। एस्तो अनुभवले उच्च सोच, रचनात्मकता, भाषा बोली आदि सबै सक्रिय हुन्छन, र यो लगातार गर्दै जाँदा मस्तिस्कको विकश हुदै जान्छ।
बालबालिकाको उच्चस्तरको मस्तिष्क विकासमा मूभमेन्ट (movement)अर्थात् हात/ औलाहरु चलाउने, हिडडुल गर्ने, खेल्ने आदि कार्यहरुको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरुलाई सानै देखि यस्तो अनिभव दिने हो भनि। हातले केहि बनाउन, सिक्न दिनेहि भनि, यसले सम्पूर्ण शरीरको विकशलाई टेवा पुराउछ।
Dr. Pratiskha Khadka, Dental Surgeon
MD Physiologist, Dept. of Physiology
Devdaha Medical College and Research Centre